EZONA NDLELA ZENDALO ZILUNGILEYO ZOKUHAMBISA ISISU SAKHO | UTHINTELO - IIVITHAMINI KUNYE NEZONGEZELELO
Ezona Ndlela zeNdalo ziLungileyo zokuHambisa isisu sakho
Eyona / Iivithamini Kunye Nezongezelelo
Iivithamini Kunye Nezongezelelo
UKUKHOLELWA KUNYE ukudumba , nokuba azikho nzulu, zinokulonakalisa usuku lwakho- kwaye ziphazamisane nokonwaba kobomi. Ukutya isidlo sangokuhlwa kuba ngumceli mngeni, kwaye ukulala nje esofeni kunokungonwabi xa uziva ugcwele kakhulu, ukonqena, okanye ubethwe zintloni.
Ngamaxesha athile isisu esibuhlungu, imifuno ekrakra- efana ne-angelica, i-burdock, i-dandelion, kunye ne-gentian-inokunceda ngokunyusa ngobunono ukukhutshwa kwe-enzymes yokugaya ukutya kunye nesisu esiswini. Ezi zityalo zisebenza ngokukodwa xa zigqityiwe-kwisaladi okanye njengeti okanye i-tonic-ngaphambi kokutya. Ungathenga imixube yemifuno ekrakra yemveli okanye wenze eyakho itoni ngeresiphi yam engezantsi. (Nazi izityalo ezi-5 kunye nezongezelelo ezinokuphucula kakhulu ukwetyisa.)
Amanye amayeza, anje ngefennel, zizinto ezenza carminatives, oko kuthetha ukuba banceda ukulwa igesi yamathumbu kunye nokuqunjelwa. Iindawo zokutyela ezininzi zaseIndiya zibonelela ngembewu yefennel ekhethiweyo yokuphefumla okuhle kunye nokunceda ukwetyisa. Eminye imifuno ye-carminative ibandakanya i-caraway, i-chamomile kunye ne-peppermint. Ukusela iti eyenziwe kula mayeza kunokunceda ukuthomalalisa isisu esibuhlungu.
Ngaphandle kwamayeza, ndicebisa iiprobiotiki- iibacteria ezifanayo okanye ezifanayo kakhulu kwiintsholongwane eziluncedo ezihlala kwindawo yakho yokwetyisa kwaye igcine inkqubo yakho isebenza kakuhle. Ungazalisa ibacteria yamathumbu akho ngokutya ukutya okune-probiotic, okufana neyogathi kunye ne-kefir, kunye nokutya okunotyiweyo, njenge-sauerkraut.
Ukuba uhlala ukhathazwa zizifo zokugaya ukutya, jonga umboneleli wakho wezempilo. Ezi mpawu ngamanye amaxesha zinokubonisa isifo esibi kakhulu, esifana nesifo sesibindi okanye isilonda.
I-TONERA YOKUPHUMA KWENKONZO
Chop 1 oz eyomileyo i-dandelion okanye ingcambu ye-angelica eyomileyo kunye ne-1/2 oz ye-orenji ye-orenji. Beka imifuno kwisitya se-pint kunye ne-1 oz imbewu yefennel. Yongeza i-brandy ye-12 oz kunye nesivalo esiseduze. Shake yonke imihla iiveki ezi-2 ukuya kwezi-3. Shintsha ilaphu le-muslin kwaye uthele kwibhotile emnyama. Ileyibhile kunye nomhla (igcina iminyaka emi-3). Thatha i-1/2 ukuya kwi-1 tsp ngaphambi kwesidlo sakho esiphambili.
yeyiphi eyona shampu ilungileyo yedandruff
isiyezi luphawu lwecovid
isalathiso senani leengelosi
Inombolo yeengelosi ezingama-888 ezinentsingiselo
indlela yokubala ii-macros ukunciphisa umzimba
bangaphi abantu abafumana umkhuhlane unyaka nonyaka